Farmaajo oo safarkiisii ugu horeeyey ugu ambabaxay Sucuudiga. – Radio Daljir
Farmaajo oo safarkiisii ugu horeeyey ugu ambabaxay Sucuudiga.
Febraayo 22, 2017 11:01 g 0
Muqdisho, Feb 23 2017-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay ka duulay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde, isagoo ku sii jeeda dalka Sacuudiga, Kadib markii uu marti qaad ka helay Boqorka Sacuudiga.
Ujeeka uu Madaxweynaha u aaday Sacuudiga ayaa waxaa lagu sheegay arrimo ku aadan Cimreysi, waxaana uu u soo duceynayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed, sida ay Risaala u sheegeen Saraakiil ku dhow Madaxtooyada Soomaaliya.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa safarkiisan noqonaya midkii ugu horreeyey ee uu ku aado dalka dibaddiisa, tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay, isagoo halkaasi kula soo kulmi doona madaxda dalka Sacuudiga.
AKHRISO-Taariikh nololeedka ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay ra’iisul wasaaraha xukuumadda cusub.